Tonga nanome voninahitra ny lanonana nahatsiarovana ny namonoana ny Kolonely Ratsimandrava Richard, Filoham-panjakana tamin’izany fotoana izany, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany 11 febroary teny Ambohijatovo, sy nahatsiarovana ihany koa an’ireo olo-malazan’ny Foloalindahy sy mpitandro ny filaminana lavo teo am-perinasa. Nambaran’ny Praiminisitra fa zava-dehibe ny fahafahan’ny firenena mahatsiaro ireo Olomangany, ary maro ny lesona azo tsoahina amin’izao fanamarihana izao. Ny fitondram-panjakana dia mametraka mazava tsara fa tsy misy fanarenana, tsy misy fahombiazana amin’ny hoavy raha tsy mahay mahatsiaro ny fitiavan-tanindrazana izay nasehon’ireo zoky ray aman-dreny teo aloha isika.
Tahirin-tsary Gasypatriote Morondava
Mbola vatan-drindrina no mijoro 18 volana taorian’ny nahamay ny biraon'ny Faritra Menabe eto Morondava ; tsy mbola voaharina hatramin'izao. Nahita maso izany ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola Randriamandrato Richard nandritra ny diany teto Morondava ny sabotsy 8 febroary 2020 teo. Ny 06 Aogositra 2018 no nahamay ity biraon’ny Faritra ity, ary potika hatramin’ny lisi-pifidianana tamin’izay. Akoson’aratra (court-ciruit) vokatry ny fitarihana jiro amin’ny asa ataon’ny BNGRC no tombanana fa fototry ny afo nanomboka tamin’ny roa tolakandro teo, io andro io, ary adin’ny telo taty aoriana vao voafehy ny fihitaran’ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra sy ny akora nandrafetana ny trano mora mirehitra, satria saika vita amin’ny hazo ny ankamaroany. Tsy manana “pompier” rahateo ihany koa ny Kaominina ambonivohitr’i Morondava fa fiaraben’ny ASECNA no namonjena namonoana ny afo.
lundi, 10 février 2020 09:45
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana: Hampiana « caméra de surveillance » amin’ireo faritra mena
Mitohy ny fametrahana « caméra de surveillance » eto an-drenivohitra ka amin'ireo faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana no hametrahana ireo fitaovana ireo. Aman-jatony ho hapetraka. Efa nisy napetraka tamin’ny fotoana nahatongavan’ny Papa François teto Madagasikara. Nampanantena ny hanampy ara-pitaovana ny OTME (Office des Transmissions Militaires de l’Etat) eny Andafiavaratra ihany koa ny tanànan’Antananarivo amin’ny fametrahana « caméra de surveillance », handaminana ny fifamoivoizana, sy hanampiana amin'ny fanadihadiana raha toa ka misy fanafihan-jiolahy.
Nihaona tao Addis-Abeba, androany, ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Praiminisitr'i Canada Justin Trudeau, ity farany izay manatanteraka fitsidihana ao Afrika. Samy maniry ny hanamafy sy hanatsara ny fifandraisana efa misy eo amin'ny firenena roa tonta izy ireo, ary naniry ihany koa ny hivelaran’ izany amin'ny sehatra hafa toy ny fanabeazana sy ny tontolo iainana. 81% ny fotodrafitrasa ao Canada moa dia miodina amin'ny alalan'ny angovo azo havaozina avokoa, ka nanambara Atoa Justin Trudeau fa vonona hifampizara traikefa sy hanohana an'i Madagasikara amin'ny fametrahana vahaolana haingana sy maharitra amin'ny fampidirana herinaratra ho an'ny rehetra.